राजाले जति गरे त हुने नि ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार २३:५९ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जनजागरण अभियान र स्थानीय तहमा असारको बजेट सिध्याउने चटारो एकसाथ जारी छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुन एक महिनामात्र बाँकी छ, बजेट सदुपयोग गर्दै काम देखाउनुपर्ने बेला हो यो । तल तल बजेट गएको छ तर कामको प्रगति खासै हुन सकेको छैन ।
नेकपाको हालत पनि त्यही हो । कार्यक्रम छैन, गति छैन, कार्यकर्तामा उत्साह पनि छैन । पञ्चायतकालमा पनि राजाले विकास क्षेत्रको दौडाह र बेलाबेला पञ्च भेला गरेर सेनामेनालाई तताइराख्थे । जनताबीच सम्बन्ध हुनुपर्ने, तर नेकपा जमेको तलाउजस्तो बनेको छ । जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
ललितपुरका सम्पदा: ‘सरकारको सुस्त, गैससको गतियुक्त’
काठमाडौं । पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेका कृष्ण मन्दिर, सुन्दरीचोकको पूर्वी भाग, योगनरेन्द्र मल्लको शालिक र भीमसेन मन्दिर अगाडिको सिंह…
म आजकल किंकर्तव्यविमूढ छु । के बोल्ने, के नबोल्ने ? मलाई अचम्म लागिरहेको छ । ‘रघुकुल रीत सदा चली…
अछाम । छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि हुने विभिन्न गोष्ठी, छलफल र अन्तक्र्रियामा यसको मुख्य कारक वृद्धवृद्धा र धामीझाँक्रीलाई मान्ने…
पक्की पुल नबन्दा तुइनबाटै तारिन्छ सवारी साधन
जाजरकोट। तुइनमा मानिस मात्र होइन सवारी साधन पनि जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्छन् भन्दा अचम्म लाग्ला तर जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको…